Strengthening the voice of the Lending Circles Partner network
हाम्रो Lending Circles पार्टनर नेटवर्कको आवाजलाई सुदृढ गर्दै
Elena Fairley मा जुन 23, 2016 द्वारा लिखित।
एमएएफको पहिलो साझेदार सल्लाहकार काउन्सिलले हाम्रो पार्टनर नेटवर्कको अन्तर्दृष्टि चलाउन उत्साहजनक अवसर प्रदान गर्दछ
हाम्रो प्रारम्भिक वर्षहरुमा मिशन डिस्ट्रिक्टमा परिवारहरूको सेवा गर्दै, हामी विश्वास गर्छौं कि Lending Circles ले हाम्रो सान फ्रान्सिस्को वरपर भन्दा टाढा समुदायहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ। उनीहरूको समुदायसँग गहिरो सम्बन्ध भएको संगठनहरू स्थानीय ग्राहकहरूको सेवाका लागि उत्तम सुसज्जित छन् भन्ने कुरा जान्दछौं, हामी सँगी गैर-नाफामुखी संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्न अघि बढ्यौं, पहिले बे एरियामा, त्यसपछि क्यालिफोर्नियाभर र अन्ततः - देश। आज पछाडि फर्केर हेर्दा, यो दर्शन कत्तिको द्रुत भयो भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ: १टीपी T टी नेटवर्कसँग अब partners० साझेदारहरू र गणना छन्।
हामीलाई थाहा छ कि विकासको साथ ठूला अवसरहरू आउँदछन्। एक Lending Circles प्रदायक भएको अनुभवलाई सुदृढ र गहन बनाउनको लागि, हामी एक साझेदार सल्लाहकार काउन्सिल गठन गरेको घोषणा गर्न गर्व गर्दछौं।
यस साझेदार सल्लाहकार काउन्सिलका सदस्यहरू (वा, हामी यसलाई कल गर्न चाहन्छौं, पीएसी) उनीहरूको अन्तरदृष्टि, स्मार्टहरू, र Lending Circles प्रदाता भएको भूमिमा अनुभव प्रदान गर्दछ। उनीहरूले सल्लाह र रणनीतिक सोच प्रदान गर्दछन्, Lending Circles नेटवर्कलाई उन्नत र सुदृढीकरण गर्ने प्रयासमा। ती योजना र होस्टिंगमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् Lending Circles शिखर सम्मेलन, Lending Circles प्रदायक र अन्य विज्ञहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन
त्यसोभए हामीले कसलाई छान्नुभयो? पार्टनर संगठनमा आठ उत्कृष्ट स्टाफ सदस्यहरू जुन Lending Circles प्रदान गर्दछ। यी आठ पीएसी सदस्यहरूले १ टीटी T टी नेटवर्कको विविधता प्रतिनिधित्व गर्छन् - अमेरिकामा भौगोलिक स्थानको सम्बन्धमा, समुदायहरूले सेवा दिएका, संगठनात्मक आकार, र अनुभव।
जोर्गे Blandón, उपाध्यक्ष, FII- राष्ट्रीय ओकल्याण्ड मा परिवार स्वतन्त्रता पहल, CA
लीसा बॉसवेल, सैन फ्रांसिस्को, CA मा SF LGBT सामुदायिक केन्द्र मा वित्तीय सेवा विशेषज्ञ
म्याडलिन क्रूज, शिकागो मा पुनरुत्थान परियोजना मा वरिष्ठ वित्तीय कोच, IL
रोब LaJoie, निर्देशक, सैन माटो, CA मा प्रायद्वीप परिवार सेवा मा वित्तीय सशक्तीकरण कार्यक्रम
ग्रिकेलदा मोन्टेस, सिएटलमा एल सेन्ट्रो डे ला रजामा सम्पत्ति निर्माण कार्यक्रम समन्वयक
जुडी एलिंग प्रिजबिला, स्लेटन, MN मा दक्षिण पश्चिम मिनेसोटा हाउसिंग पार्टनरशिपमा सामुदायिक संयोजक
पाओला टोरेस, फल्स चर्च, VA मा उत्तरी भर्जिनिया परिवार सेवामा साना व्यवसाय कार्यक्रम समन्वयक
अलेजेन्ड्रो भालेन्जुएला जूनियर, CLUES मा वित्तीय सशक्तिकरण सेवा प्रबन्धक - Comneidades Latinas Unidas En Servicio in Minneapolis, MN
पीएसी को-चेयर, लीसा बोवेल
यहाँ के सह-अध्यक्ष, लीसा बोवेलले, PAC मा सामेल हुने बारे भनेको छ:
"एसएफ एलजीबीटी सेन्टरमा मेरो काममा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्ने एक बढी न्यायसंगत विश्व सिर्जना गर्नु हो जुन लेन्डि C सर्कल कार्यक्रम हाम्रो लागि यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ। म यो कार्यक्रम केन्द्रमा मात्र नभई देशभरका बिभिन्न LGBTQ समुदायहरूमा बढेको देखेर लगानी भएको छु। मलाई लाग्छ कि पार्टनर एडवाइजरी काउन्सिलमा सामेल हुँदा मलाई यो वृद्धिलाई सफल हुन मद्दत पुर्‍याउँछ। ”
पहिलो पीएसी बैठक अप्रिल २ on मा भयो र पीएसी सदस्यहरूलाई एक अर्कालाई चिन्न, र उनीहरू भर्खरै सामेल भएको समूह चिन्न अनुमति दिए। हामीले PAC सदस्यहरूको बारेमा रमाईलो तथ्यहरू सिकेका छौं र पत्ता लगायौं कि हामीसँग पर्याप्त प्रतिभाशाली समूह छ! म्याडलिनलाई केहि अरबी थाहा छ, जर्ज न्यु योर्क सबवेमा प्रदर्शन गर्ने कविता जोडीको एक हिस्सा थिए, र पाओला नृत्य मन पराउँछन् र म्यूजिकल समूहको एक हिस्सा भइसकेको छ। यो समूहले एमएएफको आगामी १ टीटी T टी शिखर सम्मेलनका बारे केही अन्तरदृष्टि प्रतिक्रिया प्रदान गर्‍यो, र क्षितिजमा नयाँ टेक विकासको बारेमा बढि जान्नको लागि हाम्रो टेक टोलीसँग संलग्न भए।
हामी अत्यन्त आभारी छौं कि यी पीएसी सदस्यहरूले १टीपी T टी नेटवर्क अझ राम्रो बनाउनको लागि कदम चालेका छन। एक Lending Circles प्रदाता हुनुको भूमिगत अनुभवमा उनीहरूको अन्तरदृष्टि हाम्रो लागि अमूल्य छ, र आउने बर्षहरूमा एमएएफको निर्देशनलाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्दछ।